प्रयोगकर्ता वार्ता:27.34.81.172 - विकिपिडिया
सर्व प्रथम त 27.34.81.172 तपाईको योगदानको लागी नेपालीविकिपीडियाको तर्फबाट तपाईलाई धन्यवाद! तर तपाईले यसरी अनामीत भएर योगदान दिन उचित छैन। यसले गर्दा तपाईबाट यदी कुनै गल्ती भएर लेखहरुमा भेन्डालिज्मको खतरा उत्पन्न भएमा तपाईको आइ.पी. ठेगाना मा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सकिने छ। जसले गर्दा तपाईँ हमेसाको लागी अथवा केही समयको लागी विकिपीडिया सम्पादन कार्यबाट बञ्चित हुनु हुनेछ। कृपया विकिपीडियाको निर्देशन र नियमावलीहरु पालन गर्दै आफ्नो खाता बनाएर सम्पादन गर्न राम्रो होला। यदी तपाईँको खाता छ भने प्रवेस गरेर मात्र लेख्न आग्रह गरिन्छ। बाँकी कुरा तपाईलाई तलको सुचना बाट पनि जानकारी गराइएको छ। हामीलाई आशा छ तपाईले यो संदेस पढेर प्रवेस गरेर लेख्नु हुनेछ। खाता नभएमा नयाँ खाता बनाउनु हुनेछ।
तपाइँले एक कानुनको विद्यार्थी हुँ भनेर आफ्नो परिचय दिएकोमा खुसी लाग्यो विकिपीडिया एक विश्वज्ञानकोष हो भनेर आफै भन्नु भएको छ । यसमा सबै किसिमका जानकारीहरू संग्रहीत हुन्छन् । तपाइँले जैसी थरको बारेमा यो पृष्ठको वार्ता पृष्ठमा लेखेर आफ्नो राय राख्न पाइन्छ । जैसी थरको बारेमा तपाइँलाई राम्रो जानकारी छ भने तपाइँको सम्पादनको स्वागत गरिन्छ तर यसरी एक पक्षिय कुरालाई मात्र बढाएर लेखेको लेखलाई स्वतन्त्रताको मान्यता दिइन्न । तपाइँ विकिपीडियामा आफ्नो खाता बनाउनुहोला र सम्पादन सिक्नुहोला तपाइँको कानुनको विकिपीडियाले सम्मान गर्छ । तपाइँलाई पनि थाह छ जैसीको उत्पत्ती कसरी र कुन कारणबाट भएको हो भनेर । विकिपीडिया एक ज्ञानको भण्डार भएकोले यसमा त्यस्ता कुराहरू लेखिनु स्वभावीक छ जसबाट यसको बारेमा जानकारी लिन सकोस् हामीहरू जो यहाँ काम गर्दै छौं धेरै जना जैसी थरका नै छौं । विकिपीडियामा आफ्नो जाती, समाज र संस्कृतिको बारेमा जानकारी राख्न पाइन्छ तर आफ्नो जाति र आफन्तहरूको बढाइ गरेर लेख्न पाइन्न । तपाइँ आफ्नो खाता बनाएर त्यो लेखमा 'जैसी थर उत्पती हुनाको कारण यो भए पनि हालको कानुले यसलाई यो कुरामा प्रतिबन्ध लगायको छ । ' भन्ने जस्ता शब्दहरू थप्न सक्नु हुन्छ तर त्यहाँ लेखिएका सामग्रीहरू हटाउन पाउनु हुन्न । -- आर॰पी॰ जोशी कुरा गर्ने योगदान हेर्ने इमेल पठाउने
०५:४६, १७ जुलाई २०१४ (युटिसी(UTC))
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=प्रयोगकर्ता_वार्ता:27.34.81.172&oldid=411150" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ११:३४, १७ जुलाई २०१४ मा परिवर्तन गरिएको थियो।